गायक गौतमले, ‘स्यांजा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गईन…’ गीत गाउँदा खारबजार बल्यो धपक्कै ! – ebaglung.com
गायक गौतमले, ‘स्यांजा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गईन…’ गीत गाउँदा खारबजार बल्यो धपक्कै !
२०७५ मंसिर ६, बिहीबार ०९:३९	Top News, अन्य समाचार, मनोरञ्जन
कमल पौडेल, खारबजार (बडीगाड) २०७५ मंसिर ६ । चर्चित लोक गायक तथा गायिकाहरुको सांगीतिक प्रस्तुतीले प्रथम बडीगाड महोत्सव तथा पौंदी न्वागी मेला धपक्कै बलेको छ । मीठा मीठा गीतहरुको प्रस्तुतीले मंसिर महिनाको चिसोलाई धपाएको छ । दर्शकहरु मगनमस्त भएर सांगीतिक प्रस्तुतीको मज्जा उठाईरहेका छन् ।
महोत्सवको पाचौं दिन हिँजो चर्चित कलाकार थानेश्वर गौतमको प्रस्तुतीले यसै कुरालाई पुष्टि गरेको छ । दिनभर जसो बडीगाड आइडलको मुल्यांकनमा व्यस्त गायक गौतम गीत गाउन स्टेजमा उक्लिदा हुटिङले मेला नै तातेको देखियो ।
खार वजारमा भएको सो साँस्कृतिक कार्यक्रममा भर्सटाइल गायक भनेर चिनिने गौतम आफुपनि नाँचे अरु दर्शकलाई नँचाए । युवा, वृद्ध सवैलाई नचाएका गौतमले गाजल लाइन छ्यौ, छमछमती पाउजुहरु वजाएर नाच, घुम्टेमुनी कौलेनी साँइली, स्यांजा गएँ पाल्पा गएँ बटौलीमा गइन, सालैजो मार्यो नी मायाले लगाएतका गीत प्रस्तुत गरेको थिए । क्लासिकल, गजल, सालैजो, लोक, आधुनिक तथा चलचित्रका गीतमा समेत दख्खल राख्ने गौतमले सवै प्रकारका गीत गाएका थिए। शास्त्रीय संगित देखि झ्याउरे गीतहरुको सुन्दर म्युजिक मन्जरीको रुपमा चिनिने गायक गौतमले बडीगाड तथा पौंदीवासीलाई भरपूर मनोरन्जन दिएका थिए।
नेपाली गीत संगीतमा चर्चाको शिखरमा पुगेका गौतमलाई युवाहरुको वान्समोर ले अलमल पारेको थियो। छिप्पिदै गरेको रातमा गौतमको गितले थप राग थपेको थियो।
भकुण्डे बराह पुजा तथा पर्यटकीय मेलामा पर्यटन काव्य यात्रा सम्पन्न !